I-150W MP3 i-Amplifier yeZithuthi zeMoto ye-86W-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Umnxibelelanisi: lanyue whatsapp: +13602420401 99991 SKYPE: lanyueokeraXNUMX
ikhaya » I-150W MP3 yamandla eAmplifier eMoto
Apha ngumzobo wesandisi-lizwi osebenzayo. I-LF353 ye, yeSemiconductor yeSizwe, izahlulahlula isignali yomsindo ibe ngamacandelo amathathu. ISANYO'S LA47536 izakunyusa ezi zimpawu. Kwimo yestereo, siya kuba nesenzo sezithethi eziphezulu ezisibhozo eziza kwenza uxinzelelo lwezandi olubaluleke kakhulu.
Ulawulo lweToni ezintathu ezisebenzayo:
I-LF353 Yobubanzi bDwundth Dual JFET yokuFakisha ukusebenza kwe-Amplifier
Ezi zixhobo ziindleko eziphantsi, isantya esiphezulu, ii-amplifiers ezimbini zomsebenzi we-JFET ovavanyiweyo ngaphakathi ngombane woxinzelelo lwegalelo le-BI-FET II. Bafuna ubonelelo olusezantsi ngoku kodwa bagcine imveliso enkulu yeebhendi yokufumana kunye nenqanaba lokubulawa ngokukhawuleza. Ukongeza, izixhobo ezihambelana kakuhle ze-JFET zombane zivelisa izixhobo zoncedo ezisezantsi kakhulu kunye nemijikelezo yecala. I-LF353 i-pin iyahambelana ne-LM1558 esemgangathweni evumela abaqulunqi baphucule ngokukhawuleza ukusebenza kweLM1558 kunye nokuyilwa kweLM358. EziAmplifera zingasetyenziswa kwizicelo ezinje ngesantya esiphezulu sokudibanisa, isantya sokuguqula D / A abaguquli, isampula kunye nokubamba izangqa kunye nezinye izekethe ezininzi ezifuna umbane ophantsi wokufaka, ombane ophantsi okhoyo ngoku, ukuphazamisa okuninzi, ukubulawa okuphezulu kunye nobubanzi bebhendi. Ezi zixhobo zikwabonisa ingxolo ephantsi kunye ne-offset voltage drive. (Semiconductor kaZwelonke)
Amandla ombane ocetyiweyo ngaphakathi: 10 mV
Ukufakwa kwethagethi ephantsi okwangoku: 50pA
Umthamo wengxolo omncinci wegalelo: 25 nV
Ingxolo yokufaka ephantsi yangoku: 0.01 pA
Ibhendi ebanzi yokufumana: 4 MHz
Umgangatho ophezulu wokubulala: 13 V / us
Unikezelo olusezantsi lwangoku: 3.6 m
Ukuphazamiseka okuphezulu kokufaka: 1012.
Ukuphambuka okuphezulu okuphelele kwezinto:
Ikona yengxolo ephantsi eyi-1 / f: 50 Hz
Ukuhlawula ngokukhawuleza ixesha ukuya kwi-0.01%: 2 kuthi
Xa iAmplifier ifakwe ngasemva kwityesi, siya kufuna indawo yokumisa. I-LA47536 inomsebenzi omi kuyo yi-pin4. Le pine ifuna uxinzelelo oluncinci olungaphezulu kwe-2V ekuqaliseni kwe-amplifier. I-Transistor Q1 kunye ne-Q2 yenza ukuba umsebenzi wokuhamba umgama umgama. Xa umqhubi eyeka isalathiso esisekhohlo, nokuba ukhanyisa imililo yangasemva okanye ucinezele ibhuleki, izibane zangasemva zibonisa ukuqhuba kwe-Q2 ayenzileyo ukuqhuba u-Q1 osebenzisa uxinzelelo> 2V kuyo pin4. Amagqabantshintshi
I-LA47536 I-Channel ezine ze-WWT yeTV yeVidiyo yeVidiyo yeVidiyo
I-LA47536 yi-4-ye-BTL yamandla ombane we-BTL ophuhliselwe ukusetyenziswa kwiinkqubo zezandi zokumamela. Iimpawu zokuphuma kwinqanaba
-Uyilo olucocekileyo olusisiseko olusebenzisa i-V-PNP transistors kwicala eliphezulu kunye ne-NPN transistors kwicala eliphantsi ukubonelela ngamandla aphezulu kunye nomgangatho omkhulu weaudiyo.
-I-LA47536 ibandakanya phantse yonke imisebenzi efunekayo yokusetyenziswa kwesandi semoto, kubandakanya iswishi yokulinda, umsebenzi wokuguqula, kunye nesekethe nganye yokhuselo. Ikwabonelela ngomsebenzi wokuzihlola (ukuphuma kwesiphumo). (Sanyo)
1. UkuTshintsha ukuSebenza ngokuSebenzayo (phawu 4)
I-voltage 4 embundwini womqobo isetelwe kwi-2 VBE. Xa i-Vst ingu-2.0V okanye ngaphezulu, amplifier iya kuba ivuliwe, xa i-Vst, ingu-0.7V okanye iphantsi, isikhulisi siyacinywa. Qaphela ukuba iphini 4 lifuna into yangoku yokusebenza eyi-40uA.
I-IC isethwe kwisimo esiguquliweyo ngokuseta iphini yama-22 emhlabeni. Kule meko, ukuphuma komsindo kuya Mutut. Ixesha elihlala lisebenza ngalo umsebenzi wokuseta lisetwe yisekethe ye-RC yangaphandle, kwaye eli xesha lihlala liphembelela ingxolo ye-pop eyenzekayo xa kuvulwa okanye kuvalwa.
Ukuguqula kunye nokuyeka amaxesha ngenxa yamaxabiso encindi yangaphandle (R = 10k, C = 3.3uF) zezi zilandelayo.
Ukuguqula ixesha: 50ms
Ukutshintsha ixesha: 20ms
3. Umsebenzi wokuZazi ukuba ungubani na (Ukuthintela ukutshisa ngesithethi)
Ngexesha lokusebenza okuzinzileyo, i-LA47536 ibhaqa, ngaphakathi, ukuba kwenzeka okanye akukho nto isisiphumo sokukhupha amplifier, kwaye ukuphuma kwesi siginali kwi-pin 25. Izicelo zinokuthintela ukutshiswa kwesithethi kunye nezinye iingxaki ngokuthi inkqubo ye-microcontroller ibone le phawu lokungena kunye. lawula nokuba yindawo yokulinda okanye umbane. (Ukukhutshwa okungahambelaniyo kunokubangelwa, umzekelo, ukufaka i-capacitor ukuvuza okwangoku.) Isiginali ye-25 iyacimeka ngokubeka iphini 25 kumhlaba onokubakho.
4. Uzinzo lwe-Oscillator
Ngamanye amaxesha, ii-oscillations zeparasic zinokubangelwa kukubekwa kwe-PCB. Oku kuncitshiswa kungasuswa ngokudibanisa izinto ezidweliswe ngezantsi. Qaphela ukuba elona xabiso liphezulu le-capacitor kufuneka liqinisekiswe ngokuvavanywa kwimo enyuswe ngokuqinisekileyo kwimveliso yokuphela. Qhagamshela i-capacitor kunye ne-resistor (0.1uF kunye no-2.2) ngokulandelelana phakathi kwephini nganye yokuphuma kunye nomhlaba.
5. Umgangatho womsindo (Ibhendi ephantsi)
Iimpawu zokuhamba rhoqo kumanqwanqwa asezantsi anokuphuculwa ngokwenza amandla e-capacitors afakileyo atshintshe. Umthamo ocetyiswayo yi-2.2uF kwaye incinci.
6. Imijikelezo yoKhuseleko
Sukukhuphela ngaphandle iziphumo ngevolthi ye-STBY malunga ne-1.4V. Kwakhona, musa ukucima i-IC kumhlaba ophantsi kunye nexesha elihlala lilungiselelwe umbane we-STBY.
7. Ingxolo yePop
Nangona i-LA47536 ibandakanya isekethe yokuthintela ingxolo ye-pop, ingxolo ye-pop inokuncitshiswa nangakumbi ngokusebenzisa umsebenzi wokuguqula kunye. Yenza umsebenzi wokuguqula ngexesha elifanayo njengoko amandla esetyenzisiweyo. Ke, emva kokuphuma kwe-DC ezinokubakho, uvale umsebenzi wokuguqula. Xa ucima amplifier, kuqala uvule umsebenzi wokutshintsha kwaye ucime umbane. Ezi ndlela zimbini ziyasebenza ekunciphiseni ingxolo ye pop.
Iibhodi ezijikeleziweyo eziPhambili: